गर्भपतनको चक्कीहरुको प्रकारहरु र तिनीहरुको प्रयोग | मैले पहिले नै मिफेप्रिस्टोन लिएको छु भने मिसोप्रोस्टोल फेरी किन खानु? | HTU
१० र ११
क्षेत्र र साझेदारहरु
गर्भपाती चक्की निरन्तर
गर्भपाती चक्की निरन्तर सोधिएका प्रश्नहरु
गर्भपाती चक्की कसले प्रयोग गर्न सक्छन?
यदि म ठुलो जिउको महिला (अत्याधिक मोटो) हो छु, के मैले धेरै चक्की खानु पर्छ?
मेरो गर्भमा जुम्ल्याह बच्चाहरु छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएँ भने के गर्ने?
के गर्भपातको चक्की बेअसरदार हुन्छ यदि यो मैले पहिले पनि प्रयोग गरेको छु भने?
मैले IUD (कपर टि) लगाएको छु भने के मैले मिसोप्रोस्टोल को प्रयोग गर्न सक्छु?
मैले स्तनपान गराई रहँदा मिसोप्रोस्टोल खान सक्छु?
मलाई एचआईभी छ भने के मैले गर्भपतनको चक्कीहरु खान सक्छु?
मलाई रक्तअल्पत्ता भएको छ भने के मैले गर्भपाती चक्की खान सक्छु?
मेरो पहिला अपरेशन द्वारा बच्चा भएको थियो भने के अहिले गर्भपतनको चक्की लिनु असुरक्षित हुन्छ?
यदि मैले गर्भपतनको चक्कीको प्रयोग गरेँ तापनि पछि गएर म गर्भवती भएँ भने, के मेरो बच्चा कुनै रोगहरु सहित जन्मन्छ?
मैले तपाईंले पहिले नै स्त्री बन्ध्याकरण (नली बन्द) गरेको छु। तर त्यसले काम गरेन र गर्भवती भएँ। गर्भ नलीमा भएको थियो (एक्टोपिक प्रेग्नेंसी)। म अहिले फेरी गर्भवती भएँ। अब मैले गर्भपाती चक्की लिनु मेरो लागी सुरक्षित छ वा छैन?
यदि मलाई एक्टोपिक प्रेगनेन्सी भएको पत्ता लागेको छ भने मैले गर्भ पतन कसरी गराउन सक्छु?
गर्भपतनको चक्कीहरुको प्रकारहरु र तिनीहरुको प्रयोग
गर्भपाती चक्कीले कसरी काम गर्छ?
मिसोप्रोस्टोल ले के गर्छ?
Mifeprostone ले के गर्छ?
के मैले मिसोप्रोस्टोल लाई घरमा प्रयोग गर्न सक्छु?
मिसोप्रोस्टोल लिई सके पछि के मैले पानी पीउन हुन्छ?
मिफेप्रिस्टोन खाई सके पछि के मैले पानी पीउन हुन्छ?
के मैले मिसोप्रोस्टोल जिब्रोको मुनि राखेर वा यौनि भित्र राखेर प्रयोग गर्न सक्छु?
मिसोप्रोस्टोल मात्रै लिनु र मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल दुवै लिनुमा के भिन्नता छ?
मिसोप्रोस्टोल कतिको प्रभावकारी छ र मिसोप्रोस्टोल + मिफेप्रिस्टोन कतिको प्रभावकारी छ?
मैले पहिला मिफेप्रिस्टोन को प्रयोग गरिसकेको छु भने किन मैले धेरै मिसोप्रोस्टोल लिनु जरुरी छ?
मैले चक्कीको प्रयोग गरेर गर्भपतन गरेको भन्ने कुरा के अरु कसैले थाहा पाउँछन्?
गर्भपाती चक्की रोक्नु पर्ने अवस्थाहरु
कस्तो परिस्थितिहरुमा मैले घरमा गर्भपतनको चक्की लिन हुँदैन?
गर्भपात चक्कीहरुको नकारात्मक असर र जटिलताहरु
मिसोप्रोस्टोल को प्रयोग पछि कति सम्म रक्तश्राव हुनु र संकुचन हुनुलाई सामान्य भनिन्छ?
मिसोप्रोस्टोल लिए पछि पनि यदि रक्तश्राव भएन भने के गर्ने?
गर्भपतनको चक्की लिए पछि अत्याधिक रक्तश्राव भयो भने के गर्ने?
गर्भपतनको चक्की लिईसके पछि दुखाईलाई कम गर्नको निम्ति म के गर्न सक्छु?
गर्भपतनको चक्की खाए पछि के मैले सामान्य तरिकाले खानाहरु खान सक्छु?
गर्भपतनको चक्की खाए पछि के मैले सामान्य तरिकाले पेय पदार्थहरु पीउन सक्छु?
गर्भपाती चक्की खानु अघि वा खाए पछि के म मद्धपान गर्न सक्छु?
गर्भपतनको चक्कीको नकारात्मक असर हराउनको लागी कति समय लाग्छ?
मिसोप्रोस्टोल लिए पछि बिमार महसुस गर्नु र चक्कर लाग्नु के सामान्य हो?
गर्भपतनको चक्की लिईसके पछि पनि यदि गर्भधारण भयो भने मैले के गर्नुपर्छ?
गर्भपतन र भविष्यमा गर्भधारण
एउटा औषधीयगर्भपतन पछि कति छिटो म फेरी गर्भवती बन्न सक्छु?
मैले भविष्यमा पाउने बच्चामा गर्भपात चक्कीको कारणले कुनै जन्म खोटहरु हुन्छ कि?
गर्भपात चक्की लिएको कारणले मलाई भविष्यमा गर्भधारण गर्न गाह्रो बनाउँछ कि?
अन्य निरन्तर सोधिएका (FAQs) प्रश्नहरु
गर्भधारण रोक्ने एउटा माध्यम गर्भपतन हो?
गर्भपाती चक्की र विहान-पछिको चक्की (आपतकालीन गर्भनिरोधक चक्की) विच के भिन्नता छ?
औषधीयगर्भपतन गर्भपाती चक्की एउटै हो? के औषधीयगर्भपतन ल्यक्रिया गर्भपतन एउटै हो?
मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल हरु संगै मिश्रण गरिन्छ कारण यी दुवै चक्कीले एक अर्कालाई पूर्ण गर्छन। मिसोप्रोस्टोल मा प्रयोग गरिएको तत्त्वहरुले चाँही पाठेघरको मुखलाई आराम दिन्छ र खोलिदिन्छ (गर्भाशयको मुखको भाग) र पाठेघरलाई संकुचित पारिदिन्छ, जसले गर्दा गर्भलाई बाहिर धकेलिदिन्छ।
HowToUseAbortionPill.org एक दर्ता गरिएको यू.एस आधारित 501 सी (3 )गैर नाफा संगठनसंग सम्बद्ध छ।
HowToUseAbortionPill.org ले जानकारी को उद्देश्य को लागी मात्र सामग्री प्रदान गर्दछ र चिकित्सा संगठनसँग सम्बद्ध हुँदैन।